Codsi loo diray siyaasiyiinta Sweden | Somaliska
Waxaa ila soo xiriiray rag Soomaaliyeed oo codsiyo u diray qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta Sweden. Ragaan ayaa codsi ku aadan in laga qaado xayiraada mideynta reeraha Soomaalida u diray Laanta Socdaalka (Migrationsverket), Wasiirka Socdaalka iyo xisbiyada ku jira baarlamaanka Sweden ee ku mideysan dowlada. Codsigaan ayaa lagu dalbaday in shuruuda laga qaado Soomaalida ayagoo raga codsigaan diray si shaqsi ahaan ah codsigooda ugu muujiyeen dhibaatada haysata iyaga iyo reerahooda ka maqan ayagoo codsiga ku muujiyay sharciyadii adkaa ee Maxkamada Socdaalka ay dul dhigtay Soomaalida. Mid ah kid ah raga diray codsiga ayaa mar uu ila soo xiriiray ii sheegay in uu jawaab farxad leh ka filayo dhinacyada uu la xiriiray. Si kastaba ha ahaatee waan idinla soo socodsiin doonaa jawaabta laga bixiyo codsiyadaan ayadoo aysan ahayn markii ugu horeysay ee codsi loo diro Dowlada Sweden in ay shuruuda ka qaado Soomaalida ayadoo hada uu waqti ka soo wareegay markii uu wasiirka Socdaalka sheegay in uu dib u eegayo arimaha Soomaalida. Sidoo kale waqti ayaa ka soo wareegay markii ay Laanta Socdaalka noo sheegtay in Maxkamada Socdaalka ay u fadhido arimaha Soomaalida ayadoon wali aan wax jawaab ah ka soo bixin.
Waxaa ila soo xiriiray rag Soomaaliyeed oo codsiyo u diray qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta Sweden. Ragaan ayaa codsi ku aadan in laga qaado xayiraada mideynta reeraha Soomaalida u diray Laanta Socdaalka (Migrationsverket), Wasiirka Socdaalka iyo xisbiyada ku jira baarlamaanka Sweden ee ku mideysan dowlada.
Codsigaan ayaa lagu dalbaday in shuruuda laga qaado Soomaalida ayagoo raga codsigaan diray si shaqsi ahaan ah codsigooda ugu muujiyeen dhibaatada haysata iyaga iyo reerahooda ka maqan ayagoo codsiga ku muujiyay sharciyadii adkaa ee Maxkamada Socdaalka ay dul dhigtay Soomaalida.
Mid ah kid ah raga diray codsiga ayaa mar uu ila soo xiriiray ii sheegay in uu jawaab farxad leh ka filayo dhinacyada uu la xiriiray.
Si kastaba ha ahaatee waan idinla soo socodsiin doonaa jawaabta laga bixiyo codsiyadaan ayadoo aysan ahayn markii ugu horeysay ee codsi loo diro Dowlada Sweden in ay shuruuda ka qaado Soomaalida ayadoo hada uu waqti ka soo wareegay markii uu wasiirka Socdaalka sheegay in uu dib u eegayo arimaha Soomaalida. Sidoo kale waqti ayaa ka soo wareegay markii ay Laanta Socdaalka noo sheegtay in Maxkamada Socdaalka ay u fadhido arimaha Soomaalida ayadoon wali aan wax jawaab ah ka soo bixin.
waad mahadsantihiin jimcaale iyo saciid dadaalka aad usameyseen ummada somaliyeed ee dadaalka halkiina kasiiwada taariikhda ayaa idiin xusidoonta marlabaad ayaan idiinleeyahay waa mahadsantihiin
waan idin salaamay salaan kadib webka sumcada aad ku bilowdeen ha iska dilina maxaa yeelay xogta raadiya ka dib dadka u soo gudbiya maxaa yeelay soomaali badan ayaa idinku xiran oo xog dhab ah idinka sugeyso sidaan ayaa la yiri iska daaya.
waad mahadsan tihiin shaqo wacan
February 18, 2011 at 20:31
Ahmed waad ku mahadsantahay fariinta, maxaad u aragtaa in ay sumcadeena wax u dhimayaan oo halkaan ku qoran? wararka kuwa la xaqiijiyay iyo kuwa laysla dhexmarayo intaba saxaafada way qortaa marka taas wax sharaf dil ah ma ahan balse mowduucana intaas kuma saabsana.